धनको संकटवाट मुक्त हुने केहि उपाय, लागु गरेर हेर्नुहोस् एक पटक – Sanjal Nepal
Homeसमाचारधनको संकटवाट मुक्त हुने केहि उपाय, लागु गरेर हेर्नुहोस् एक पटक
November 14, 2020 admin समाचार 7057
प्राय मानिसहरु जहिलेपनि धन अभाव भएको र पैसा बचाउन नसकेको बताएका भेटिन्छन् । तर किन यसरी संकट भइरहेको छ धन? के छ धन बचाउने उपायहरु ? यी र यस्तै समस्याले सताएको छ भने कतै तपाईंले कुनै गल्ती पो गरिरहनुभएको छ कि? यहाँ प्रस्तुत गरिएका मध्ये कुनै गल्ती अनिवार्य गरिरहनुभएको छ जसले देवी लक्ष्मी तपाईसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । एक पटक यी कुराहरु ध्यान दिएर मनन गर्नुहोस तपाईंको धनको संकट हराएर जानेछ ।जून घरमा पूजाको दिप फुकेर जलाइन्छ त्यहाँ लक्ष्मी आउनुहुन्न् ।
यदि तपाई टुटेको काइयोले कपाल कोर्नुहुन्छ भने त्यो धनका लागि अपशगुन मानिन्छ ।
रातमा खुट्टा नधोएरै सुत्दा वा गीलो खुट्टा लिएर सुत्ने बानी पनि धनका लागि अशुभ हो ।शास्‍त्रमा भनिएको छ क‌ि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको बीचमा स्‍त्री-पुरुषले यौन सम्पर्क राख्नबाट बच्नुपर्छ । जहाँ द‌िनको समयमा स्‍त्री पुरुष यौन सम्पर्क राख्छन् त्यहाँ लक्ष्मीले वास गर्नुहुन्न् ।
यदि तपाई रातको जूठो भाडाकुडा घरमा राख्नुहुन्छ वा विहान धुनुहुन्छ भने यो बानीलाई परिवर्तन गर्नस् । यसो गरे घरबाट लक्ष्मी भाग्ने छैनन् ।
यदि तपाईको नङ चपाउने वा दांतले काट्ने बानी छ भने यो पनि धनका लागि राम्रो होइन् । यस्तो बानीले तपाईको शरीर हमेशा जूठो हुन्छ जसले लक्ष्मी असन्तुष्ट हुन्छिन् ।
जून घरमा सूर्यास्तपछि झाडू लगाउँछन् त्यहाँ लक्ष्मी बस्न चाँहदिनन् ।
शास्‍त्रले भनेको छ क‌ि जून घरमा प‌ितृपक्षमा प‌ितरहरुको श्राद्ध गरिँदैन् त्यहाँ लक्ष्मी बस्दिनन् ।
जून घरमा न‌ियम‌ित शंख बज्दैन् वा देवी–देवताहरुका बारेमा अपशब्द बोलिन्छ त्यहाँ लक्ष्मीले कहिल्यै पनि बास गर्दिनन् ।
November 26, 2020 admin समाचार 1514
January 2, 2021 admin समाचार 2160
December 26, 2020 admin समाचार 1519
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (105639)